Bank of America patents blockchain chibatiso turusi
Bank of America akunda munhu “chibatiso uye date voga bvumidzwa” maererano US Patent uye vanozivikanwa Office, nekuti nzira kudzora kuwana zvimwe zvinhu permissioned blockchain samambure.
The mubhengi akatsanangura:
“A kudiwa chiripo kugovera akasarudzwa masangano / vanoshandisa kukwanisa nyore kuziva matombo kuti inoshandawo akasarudzwa vanoshandisa’ hanya, uye kamwe Zvidhinha zvave kuzivikanwa, kuchengeteka zvinhu chokwadi kuti akasarudzwa masangano / mushandisi kuti vari kuwana zvidhinha vari, saizvozvo, vanozvishandisa mvumo.”
Russian State Duma rinobvumira crypto indasitiri bhiri
ReRussia paramende, State Duma, akafarirwa mitemo mitsva yokudzora ari crypto indasitiri. Mitemo kutsanangura cryptocurrencies uye zviratidzo sezvo pfuma, voisa nokurondedzerwa kuti kuwadzana crypto uye blockchain nekunetseka ruzivo.
410 Vatariri rakabvuma bhiri iri kunzwa, pamwe kuvhota imwe chete naro.
Bhiri "On Digital Financial Zvinhu" iyo yave pasi kukurukurwa kubva rapera pamwe kwokupedzisira kupedza yaJuly 1st, anobata cryptocurrencies, uyewo blockchain zvine michina yakadai ngwara zvibvumirano, uye kuchera.
CFTC nenyaya nenhungamiro yemakambani kupa cryptocurrency nomukaka
The U.S. Chinokosha hwamangwana Trading Commission (CFTC) akaita akasunungura nhungamiro itsva exchanges kuronga kunyora cryptocurrency-chokuita rinobva zvigadzirwa.
Rakagadzirirwa kubatsira kumusika vechikamu kuva ngozi utariri zvirongwa “pamutemo kutsanangurika” pamusoro “nzvimbo huru kuti zvinoda pfungwa” akadai sei kuti 'titevere zvakakodzera Hurumende pezvakaitwa noruremekedzo kuti pakuparurwa mishonga iyi,” maererano DCR wekambani Brian Bussey.
Marshall Islands zvakaitika mutemo rokuita crypto zvavo National mari
cryptocurrency ravo idzva rinonzi Changamire (SOV) uye achatora nzvimbo USD sezvo bedzi National mari.
Currency itsva vachava yepamutemo nomutemo orudo mabhizimisi uye 53,000 vagari kuMarshall Islands – anotonga mamiriro uye nhengo UN.
Ichi ndicho chokutanga chete changamire cryptocurrency akasaina mumutemo uye zvinokosha nokuti (mu dzidziso kanenge) zvinoreva kuti masangano mari dzakadai nemabhengi Visa vachafanira kubvuma SOV sezvo ratova pamutemo rukuru anotonga rudzi.